Creative Writing » ဂွဇွတ်ရွာမှ စိန်ခေါ်သံ (သို့ ) ချက်တင်တောင်ထိတ်မှ မီးတစ်စ – အပိုင်း (၂) ဇာတ်သိမ်း	25
” ယားးး ယိစ် … ဘုန်း … အင့် “
ဂျစ်စူ says: ဟင်
မမချွိ says: အံမာ။
အောင် မိုးသူ says: ဒါမျိုးတွေလည်း မမချွိက ဖြစ်တာပဲနော်
မမချွိ says: တညားရေးတာမဟုတ်ဘူး ဆို။
ကပ္ပိယ သာဒင်​ says: ဟိုင်းယား
မမချွိ says: ဓားမလိုဘု အတွင်းအားချိဒယ်။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ကွီးယား၂ကားကျိရင် ထမင်းတစ်ပွဲကြွေးပါ့လားဟင်..
အာ့ဆို တစ်ရက် ၆ကားနှုန်းနဲ့ ၃နပ်စာ နေ့တိုင်းကျိပေးပါ့မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: ညက်လုံးကလည်း ဒီ အစားပဲ အရင် ညင်ဒါလားး…
Thint Aye Yeik says: ဝမ်းးးးးးစမိုးးးးးးး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ ရီလိုက်ရတာ အူကို နာနေတာပဲ။ ရွာထဲ ၀င်လို့ကို မရ။
မမချွိ says: ခု သတင်းရသလောက်တော့ ဝက်တားဒုတ်ထိုးဆိုင်ထဲမှာ ပုန်းနေပုံပဲ။
Swal Taw Ywet says: အနှီ ၀က်သား သုံးထပ်သား
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မဟာလစ်ဗြဲ ဗြန်းဗြန်းကွဲ ဘွားဘွားဝင့်သည် ဟာတာတိဟာတာ ၀က်သားဒုတ်ထိုးကို တိတ်တဆိတ် ရှာဖွေလျက်ရှိနေရာ အစုံစားသခင်ထံတွင် ရှိကြောင်း သိုးသိုးသန့်သန့် သတင်းရထားလေပြီ။ ထိုအစုံစားသခင်ဆိုသူမှာ ယခင် ပျံလွှားမယ် ဘာကာ ခုနစ်လွှာသိုင်းသမား ဇာယိခိုင် တစ်ဖြစ်လဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသောကြောင့် အလွန်တရာ တန်ဖိုးကြီးလှစွာသော ဟာတာတိဟာတာ ကို ဥပါယ်တံမျဉ်ဖြင့် ရယူနိုင်ရေးအတွက် ဗိတိန်သခင်မကြီး စာကလေးကင်ကို မျက်နှာချိုသွေး အလျှော့ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်တကား။
Sine Sant says: ဇာတ်လမ်းသာပြီးသွားသီ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: နယ်စားကြီးပေါင်ချိန်ဖြိုးမှ ရှောင်လင်အပြင်ဂိုဏ်းကို ဖြိုခွဲနိုင်ပါမည်လော ..???
. ရှောင်လင်အပြင်ဂိုဏ်းအရေးနိမ့်ရှာလေပြီတည်း…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
A mar nyo says: နေ့တိုင်းသွားစားရမယ်ထမင်းဆိုင်တိုးလာပြီ
kai says: အင်း.. ဟုတ်ပါ့.. ရပ်ရေးရွာရေး.. ဒီခေတ်မယ်.. တယ်ရှုပ်သကိုး..။
nicolus agral says: just nature ပါသဂျီးရာ
Wow says: ငင် သိုင်းဝုတ်ထုတွေလို ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဖတ်ရမယ်ထင်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 181
nicolus agral says: အသေအကျေလဲချဘူး
မြစပဲရိုး says: ဇီးကွက်မင်း ရဲ့ တိုက်ကွက် ကို ခိုးပြီး တစ်ခြားမှာ သွားဖိုက်နေတာ ဘူမှ မသိ။ :-))))) :P
တောတွင်းပျော် says: အပိုင်းတစ်က စဖတ်တော့အပိုင်းပိုင်းရှိမယ် မျှော်လင့် ထားတာ။
မမချွိ says: ခညာ